कसले हांक्ला अब एनआरएनए अमेरिका ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७६-०१-१० बिचार / प्रतिक्रिया
३ इन्जिनीयरले ताके अध्यक्ष पद
जनसम्पर्ककै दुई समूह, नेतापिच्छेका उम्मेद्वार
गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाको नेतृत्वका लागि ३ जना चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । एनआरएन अमेरिकाको आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठित निर्वाचन समितिले जारी गरेको निर्वाचन कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुरुप अध्यक्षका लागि ३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
उम्मेदवारी फिर्ताको समय बाँकी रहेको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका ३ जनामध्ये कसैले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिने सम्भावना नदेखिएकाले नेतृत्वका लागि ३ जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
अध्यक्ष पदका लागि टेक्ससका सुनील साह र न्यूयोर्कका सूर्य (साल) लम्साल तथा सञ्जय थापा प्रतिस्पर्धाका लागि अगाडि आएका छन् । साह वर्तमान कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् भने थापा बोर्ड अफ डाइरेक्टर र लम्साल पूर्व बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुन् । दुवै पेशाले इन्जिनीयर हुन् । अहिलेका एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष पेशाले डाक्टर हुन्, अहिलेका डा. केशव पौडेलभन्दा अघि वकिल पेशामा संलग्न खगेन्द्र जिसी अध्यक्ष थिए ।
उम्मेदवारी दर्ता हुनुअघि बोर्ड अफ डाइरेक्टर डा. अर्जुन बञ्जाडे, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण पोखरेल, प्रवक्ता विनोद तिवारीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चर्चा भए पनि अन्तिममा साह, लम्साल र थापाको मात्र अध्यक्षमा उम्मेदवारी परेको हो । डा. बञ्जाडेले साहलाई सहयोग गर्ने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने तिवारीले समेत साहलाई सहयोग गर्ने जनाएका छन् ।
एनआरएनमा राजनीतिक रङ हुन नहुने चर्चा समय–समयमा उठे तापनि यस पटक पनि एनआरएन अमेरिकाको उम्मेदवारी दर्तादेखि नै राजनितिक विचारले स्थान जमाएको छ । नेपाली कांग्रेस निकटको जनसम्पर्क समिति र नेकपा निकटको प्रवासी मञ्चबीच कित्ताकाटको अवस्था देखिएको छ । अमेरिकी नेपाली डायस्पोरामा प्रभाव अलि बढी रहेको भनिएको जनसम्पर्कभित्र पनि दुई समूह देखा परेको छ । साह र लम्साल दुवैलाई जनसम्पर्कको साथ रहेको बताइन्छ भने थापा प्रवासी मञ्चको साथले अघि बढेका छन् ।
खुलेर जनसम्पर्क समिति तथा प्रवासी मञ्च कसैले पनि आधिकारिक धारणा बाहिर भने ल्याएका छैनन् ।
जनसम्पर्कभित्र मिलाएर १ जना उम्मेदवार बनाउने प्रयास गरिए पनि साह र बञ्जाडे मिले पनि लम्साल र साहलाई भने मिलाउन नसकिएको बुझिएको छ । तथापि जनसम्पर्कले आन्तरिक रुपमा भने आधिकारिक उम्मेदवारका रुपमा साहलाई लिएको बुझ्न सकिन्छ । किनकि जनसम्पर्क अमेरिकाका संस्थापकभित्र पर्ने डा. अर्जुन बञ्जाडे साहलाई सहयोग गर्नेगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । तर, जनसम्पर्ककै कतिपय नेताहरुले भने लम्साललाई बोकेका छन् ।
जनसम्पर्कभित्रकै अमृत सापकोटा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठेका छन् । उनी र डा. बञ्जाडेको सन्दर्भमा पनि जनसम्पर्कका नेताहरुबीच पनि मत मिल्न सकेको छैन । त्यसो त वरिष्ठ उपाध्यक्ष हालकी महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठी र नारायण कँडेल पनि उठेका छन् । यस्तै, महासचिवमा उठेका पशुपति पाण्डे र अञ्जन चौलागाईंको सन्दर्भमा पनि जनसम्पर्कका नेताहरुको एकमत छैन । महासचिवमा हालका बोर्ड अफ डाइरेक्टर गोपेन्द्र भट्टराई पनि उठेका छन् ।
कोषाध्यक्षमा उठेका बन्धु पोखरेलको सन्दर्भमा भने जनसम्पर्कका नेताहरु अलि बढी सकारात्मक रहेको बताइन्छ । तर पनि केही जनसम्पर्कका नेताहरुले रविन वज्राचार्यलाई सहयोग गरिरहेको बताइएको छ । कोषाध्यक्षमा प्रशन्न संग्रोलाले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । सचिवमा उम्मेदवारी दिएका हालका बोर्ड अफ डाइरेक्टर अमृत कट्टेललाई जनसम्पर्कको सहयोग रहेको बताइन्छ भने सचिवमा उठेका हालका एनआरएन अमेरिका टेक्सस च्याप्टर अध्यक्ष भानु खरेललाई समेत जनसम्पर्कका केही नेताको ढाडस रहेको बुझिएको छ । सहकोषाध्यक्षमा जनसम्पर्कको सहयोग सन्तोष विष्टलाई रहने बुझिएको छ भने कतिपय नेताले पनि सतीशकुमार ओझालाई बोकेका छन् ।
क्षेत्रगत उपाध्यक्षहरुमा नर्थ इष्टतर्फ बीआर लामालाई केही जनसम्पर्क नेताले सहयोग गरेका छन् भने महेश मल्ललाई केही नेताले काँध थापेका छन् । मिडवेष्टमा बुद्धी सुवेदीलाई जनसम्पर्कको सहयोग छ भने त्यस क्षेत्रबाट उठेका अर्का बाला घिमिरेलाई कतिपय जनसम्पर्कका नेताले सहयोग गरिरहेका बुझिएको छ, घिमिरे प्रवासी मञ्च नजिक मानिन्छन् । साउथ वेष्टतर्फ थलराज पन्तलाई केही जनसम्पर्कका नेताहरुले सहयोग गरिरहेका छन् भने केही जनसम्पर्कका नेताले कृष्णजीवी पन्तलाई सहयोग गरेका छन् । वेष्टतर्फ केहीले रामबाबु पाण्डे र केहीले सर्वज्ञ वाग्लेलाई बोकेका छन् ।
कस्तो बन्ला समूह ?
उम्मेदवारी फिर्ताको समय नसकिएला कुनै पनि समूहले आफ्नो समूहभित्र पर्ने व्यक्तिहरुको नाम बाहिर नल्याइसकेको भए पनि आन्तरिक तयारी भने भइसकेको बताइएको छ । अध्यक्षमा सुनील साहलाई अगाडि सारेको समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. अर्जुन बञ्जाडे, उपाध्यक्षमा नर्थ इष्टमा बीआर लामा, मिड वेष्टमा बुद्धी सुवेदी, साउथ वेष्टमा कृष्णजीवी पन्त र वेष्टमा सर्वज्ञ वाग्लेलाई समर्थन गर्नेछ । यस्तै, यो समूहबाट महासचिवमा पशुपती पाण्डे, सचिवमा अमृत कट्टेल, कोषाध्यक्षमा बन्धु पोखरेल र सहकोषाध्यक्षमा सन्तोष विष्ट पर्ने बताइएको छ । तर, यही समूहकै जनसम्पर्ककै कतिपय नेताहरुले भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अमृत सापकोटालाई सघाउने बुझिएको छ । सापकोटासमेत जनसम्पर्कमा योगदान दिएका नेता भएकाले उनलाई सघाउनुपर्ने पक्षमा उनीहरुले मत जाहेर गर्दै आएको बताइएको छ ।
लम्साल समूह पनि जनसम्पर्ककै बलमा अघि बढिरहेको समूह भएकाले यो समूहले पनि साहको समूह निर्माणलाई कुरेर बसेको बताइएको छ । साहको समूहमा नपरेकालाई आफ्नो समूहमा पार्ने रणनीति यो समूहले बनाएको बताइएको छ । एनआरएन अमेरिकाभित्र अर्को खेमा निर्माणमा जुटेका पासाङ लामा समूहको समेत साथ पाएर अघि बढेको लम्सालको समूहमा अमृत सापकोटालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा समर्थन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भएको बताइएको छ । यो समूहले उपाध्यक्षमा नर्थ इष्टमा महेश मल्ल, मिड वेष्टमा बुद्धी सुवेदी, साउथमा थलराज पन्त र वेष्टमा सर्वज्ञ वाग्लेलाई लिने बुझिएको छ । तथापि मिड वेष्टमा घिमिरेलाई लिदा प्रवासी मञ्च समर्थकको मतसमेत आफ्नो समूहले पाउने बुझाइसमेत यो समूहले लिएको छ भने वेष्टमा सर्वज्ञलाई नै प्राथमिकतामा पार्ने तथापि रामबाबुसँग समेत समदूरी अन्तिमसम्म गराइराख्ने रणनीति रहेको बुझिएको छ ।
यस्तै, यो समूहले नेविसंघका पूर्वनेता अञ्जन चौलागार्इंलाई महासचिव, भानु खरेललाई सचिव, रविन वज्राचार्यलाई कोषाध्यक्ष र सन्तोष विष्टलाई सहकोषाध्यक्षमा सहयोग गर्ने बताइएको छ । तर, साहको समूहमा नपरेका गोपेन्द्र भट्टराईलाई महासचिवमा ल्याउँदा मत हासिल गर्न त्यसले सघाउ पुग्नेबारे समेत चर्चा भइरहेको बताइएको छ । सहकोषाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका सतिश ओझालाई आफ्नो समूहमा बस्न आग्रह गर्नेबारे समेत आन्तरिक छलफल भएको बताइएको छ । यस्तै, युवा संयोजकमा प्रितम कुशीयात र महिला संयोजकमा दीक्षा बस्नेतलाई सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
गत एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनहरुभन्दा यस पटकको निर्वाचनमा सदस्यको हिसाबले समेत केही सदस्य थप्न सफल भएसँगै प्रवासी नेपाली मञ्च समर्थकहरुले समेत यस पटकको एनआरएन अमेरिकाको निर्वाचनमा प्रभावकारी उपस्थिति र चर्चा जमाइरहेका छन् । यसै क्रममा अध्यक्षका उम्मेदवार सञ्जय थापाको समूहले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यो समूहको वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुन नारायण कँडेल, महासचिवमा दुवै समूहमा नपरेका उम्मेदवारलाई आफ्नो समूहमा राखेर अगाडि बढ्ने तयारी यो समूहको रहेको छ । उपाध्यक्षहरुमा समेत खासै व्यक्ति किटान गरिनसकेको यो समूहले उम्मेदवार मतको जोड–घटाउ र त्यसले आफूहरुको उम्मेदवारलाई हुने फाइदा हेरेर समर्थन गर्ने र टिममा राख्ने तयारी गरेको छ । मिड वेष्टबाट भने वाला घिमिरेलाई उपाध्यक्षमा विजयी बनाउने तयारी यो समूहले गरेको छ । यो समूहले सके अध्यक्षसहित मिड वेष्ट उपाध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना बोर्ड अफ डाइरेक्टर आफ्नो समूहलाई जिताउने लक्ष्य आन्तरिक रुपमा राखेको बताइएको छ ।
अन्य पदको अवस्था के रहन्छ
१२ जना बोर्ड अफ डाइरेक्टरका लागि ४० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । ४० जनालाई ३ वटा फरक समूहमा राखेर विभाजित गर्दा पनि सबै उम्मेदवार अट्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसो गर्दा पनि ४ जना टिममै पर्ने अवस्था छैन भने कतिपय बोर्ड अफ डाइरेक्टर दुई वटा समूह र केही ३ वटै समूहमा पर्नेछन् । ७ जना निर्वाचित हुने आईसीसी सदस्य पदका लागि समेत ११ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिएकामध्ये होम गौतम, स्वराज खाती, रामकुमार सुवेदी, विष्णु शाह, तृष्णा काफ्लेलाई साह र लम्साल दुवैको सहयोग रहेको बताइएको छ । युवा संयोजकमा २ जना, महिला संयोजकमा २ जना र विभिन्न च्याप्टरका विभिन्न पदमा गरी २ सय ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा केही च्याप्टरमा समेत समूह–समूह बनेको छ ।
जनसम्पर्कका नेतापिच्छे उम्मेदवार
अध्यक्षमा एउटा व्यक्तिलाई सहयोग गरे पनि अन्य पदमा भने फरक समूहका व्यक्तिलाई जनसम्पर्कका नेताको सहयोग रहेको छ । जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा प्रभाव राख्ने नेताहरुका विभिन्न पदमा आ–आफ्नै उम्मेदवार रहेका छन् । अध्यक्षमा एउटा हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अर्को उम्मेदवार, महासचिवमा अर्को, कोषाध्यक्षमा अर्को उम्मेदवारहरुलाई नेताहरुले सघाइरहेका छन् । यसलाई नकारात्मकभन्दा पनि संस्थामा आवश्यकताका आधारमा व्यक्तिको चयनका रुपमा लिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेतृत्व प्रधान विषय भए पनि अन्य सन्दर्भमा लोयल भएर जानुपर्ने र सहयोग जनसम्पर्ककै साथीहरुलाई गरिएको उनीहरु बताउँछन् । जसरी जहाँबाट आए पनि जनसम्पर्ककै नेताहरु एनआरएन अमेरिकामा आउने भन्दै उनीहरु लडाइ घरभित्रै भएको र यसलाई आफूहरुले सकारात्मक अभ्यासका रुपमा हेरेको प्रतिक्रिया उनीहरुको छ ।
विगतभन्दा केही परिमार्जित रुपमा सदस्यता वितरण गरिएको एनआरएन अमेरिकामा झण्डै ९ हजार बढी सदस्य रहेका छन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका साह, लम्साल र थापा समूहको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सदस्यभन्दा पनि धेरै मतदाता भेटिन्छन् । तर, स्रोतका अनुसार थापासँग जित्नेगरी मत भने नभएकाले प्रतिस्पर्धा साह र लम्सालबीच नै हुनेछ । हुन त थापा समूहले पनि आफूहरुसँग झण्डै २ हजार ५ सय पकेट मत रहेको बताउँदै आएको छ ।